Izindaba - Ukubaluleka Kokupakisha
Ukupakisha Komkhiqizo kubhekiswa kumabhokisi, amabhokisi, izikhwama, amabhamuza, ukufaka, izitika namalebula njll.
Ukupakisha komkhiqizo kunganikeza ukuvikeleka okufanele ukuvikela ukuthi imikhiqizo ingalimali ngesikhathi senqubo yokuhamba, yokugcina nokuthengisa.
Ngaphandle komsebenzi wokuvikela, ukufakwa komkhiqizo kudlala indima ebalulekile ekuhlobiseni umkhiqizo, ukukhuthaza umkhiqizo, ukuhlangana nezidingo zobuhle zamakhasimende kanye nezidingo ezingokwengqondo ekugcineni kusheshisa inqubekela phambili yokuthengisa.
Ukupakisha umkhiqizo kungumbono obonakalayo womkhiqizo; Isipikha sezici zomkhiqizo; Ukwethulwa kwesithombe sebhizinisi nokuma.
Ukupakishwa kwemikhiqizo yakhelwe kahle kuyindlela ebalulekile yokwenza inzuzo yebhizinisi. Ukuma kwamasu okunembayo nokuhambisana nokuklanywa kokusebenza kwengqondo yamakhasimende kungasiza ibhizinisi ukuthi ligqame eqenjini lemikhiqizo yabancintisana futhi lizuze idumela elihle.
Imithetho kaDuPont iveza ukuthi ama-63% wabathengi bathatha izinqumo zabo zokuthenga ngokuya nje ngomkhiqizo ohlanganisiwe. Ngenxa yalokhu, umnotho wezimakethe kulezi zinsuku nawo uvame ukubizwa ngokuthi umnotho wokunaka. Umkhiqizo odonsa amehlo kuphela ongabonakala futhi wemukelwe ngumthengi futhi uguqulwe ube ukuthengisa.
Ngakho-ke, wonke amabhizinisi kufanele anake kakhulu umsebenzi wokupakisha ku-branding.
Wonke umkhiqizo unokupakisha kwawo okuhlukile, futhi imikhiqizo emikhulu ayigodli ngisho nemali ekuklanyeni ukupakisha okuphelele kwempahla yayo.
Ngokusobala, ukufakwa kubaluleke kakhulu kwimikhiqizo:
Ukupakisha Uhlobo Lamandla Wokuthengisa.
Namuhla, iMakethe igcwele imikhiqizo ehlukahlukene, ukunakwa komkhiqizo ngamunye kufushane kakhulu, futhi okufakiwe kufanele kubambe futhi kubambe umthengi lapho bebeka amazwibela emashalofini. Ukupakisha kuphela okusebenzise ngokucophelela iDizayini, Umbala, Isimo, Izinto ukumela imininingwane yoMkhiqizo, Umqondo Wenkampani Nenkambiso Yenkampani, okungadonsela ikhasimende futhi kunikeze ikhasimende umbono omuhle womkhiqizo nomkhiqizo, bese kuholela esenzweni sokuthenga .
Ukupakisha kungamandla okuthengisa athatha umthwalo oyinhloko wokuheha abathengi.
Ukupakisha Luhlobo Lwamandla Okuhlonza.
Lapho ukupakisha kuheha ngempumelelo umthengi futhi kubamba ukunakwa kwabo, ukupakisha kufanele kube nomsebenzi wokudlulisa imininingwane nezici zomkhiqizo.
Ukupakisha komkhiqizo akudingi nje kuphela ukubukeka okunethezeka okwenziwe kahle kepha futhi kungakhulumela umkhiqizo.
Ukusebenza kwemakethe yomkhiqizo kuya ngokuthi kuhle kangakanani ukupakisha kuveza izici zomkhiqizo nolwazi oluningiliziwe.
Ukupakisha Luhlobo Lamandla Okubeka uphawu.
Ukupakisha kunomsebenzi Wokumaketha Nophawu. Okusho ukuthi, ukufakwa kungakhombisa imininingwane yomkhiqizo; yakha umazisi womkhiqizo bese uvumela umthengi aqonde igama leBrand, impahla yeBrand, ngaleyo ndlela akhe isithombe somkhiqizo.
Ngokwakhiwa kwebhrend, ukufakwa nakho kungaphathwa njengomunye womthombo weBrand Image.
Ukupakisha njengesethulo sangaphandle esibalulekile somkhiqizo, kuthwala umthwalo wemfanelo wokuthi ibhizinisi lifuna ukulinika umthengi.
Ukupakisha kuyindima enkulu ekuhlukanisweni komkhiqizo. Kungadala isici somkhiqizo futhi ngalokhu abathengi bayakhangwa futhi ukuthengisa kuyenziwa.
Okufakiwe Ingabe Uhlobo Lamasiko Amandla.
Inhliziyo yokupakisha ayilele nje ekubukekeni kwangaphandle nasesimweni, kepha futhi yakha kusukela ekuxubeni komlingiswa ngamunye kanye nomlingiswa othandekayo.
Ukupakisha kungakhombisa iSiko lomkhiqizo nebhizinisi ngempumelelo
Ukupakisha Uhlobo Lwe-Affinity Power.
Ukupakisha komkhiqizo kuhloswe ngabathengi, kungahlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zomthengi, okwamanje kuletha amandla okusondelana kubathengi.
Sekukonke, ukupakisha kunikezwa ngemisebenzi eyengeziwe.
Ukupakisha kudlala indima ebaluleke kakhulu ekumaketheni nasekushicileleni.
Isikhathi Iposi: Nov-20-2020